Maghreb: Nifampiresaka tamin’I Polisario ny solotenan’ny firenena mikambana mpiandraikitra an’i Sahara andrefana. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2009 14:17 GMT
Tonga tao Alzeria I Christopher Ross omaly, solotena manokana avy amin’ny firenena mikambana misahana ny raharaha Sahara andrefana, mba hifampireska amin’ny fiadidian’ny Polisario, araky AFP. Mitatitra ny fivorianaI Daily Maghreb, manao hoe:
“Nanongila-tsofina” ihany aloha I Ross rehefa nidinidinika niaraka tamin’ny minisitry ny raharaham-bahinin’ny Morocco Taieb Fassi Fihri sy ny mpitondra ambony ao amin’ny Filan-kevitry ny Raharaha Sahara (CORCAS), ny loharano azo dia milaza hoe:
Niadian’I hetsika tsy miankin’ny Polisario Front hevitra ny fibodoana tany ataon’I Morocco raha toa ka ny Fanjakana Afrikana avaratra no efa nividy izany tao aorian’ny fisitonam-bolan’ireo mpiavy Espaniola tany afovoan’ny taona 1970.
Tonga tao Rabat I Ross tamin’ny Alarobia rehefa avy nomen’ny mpitondra ao amin’ny ivom-pitantanan’ny firenena mikambana any New York fampitandremana mikasika ny tohitra manolona ny vinavina goavana ao anatin’ity misiona ity izay fantatra fa ity solotena vaovao ity dia mety hanana fahafahana mamehy avy hatrany ny fifanarahana.
Nitsikera mikasika ny zava-misy ihany koa I alle,izay manoratra ao amin’ny blaogy vaovao, Maghreb Politics Review:
Ity no fandehanana voalohany nataony ka ahitany ny ady hevitra, ary gaga be izy tamin’ny resaka nataony tao amin’ny televiziona Aljazeera tamin’ny fiteny Arabo tsy misy fihambahambana. – fa ny voalazany kosa tami’izany dia “tsy nisy azo notsikerana” akory. Ohatrany hoe kisendrasendra fa tena nanome sorik’endrika ny olana ao amin’ny tontolon’ny Sahara tandrefana izany.
Milaza i van kaas izay mitsikera ao amin’ny bolongana:
Ho tonga ao amin’ny tobin’ireo mpialokaloka Sahrawi I Ross androany ary mety hahazo fanontaniana izy mikasika ireo vaovao avy amin’ny mpitondra fanjakana Moroccan izay mahakasika ny fahaverezan’ireo Saharawis. Efa tokony ho ela no voavaha ity olana ity, ary ity fitarainana efa naharitra hatrizay ity dia iray amin’ny tsy fahaizan’I Van Walsum, iraka avy amin’ny firenena mikambana SESGUNWS.
Nanoratra I Sahara tandrefana :
Noraisin’ny vahoaka sy mpitarika tao amin’ny tobin’ny mpialokaloka Sahraoui Andriamatoa Ross. Nilaza andriamatoa Ross fa tonga izy mba hitady vahaolana ara-politika azo ekena ho an’ny andaniny roa tonta. (Morocco sy Plisario Front), izay hanome an’ny vahoaka Sahraoui fahafahana hamaritra ny ho aviny.
Trano Tindouf efa ho telopolo taona, mpialokaloka Sahraoui miisa 165 000, araka ny antontan’isa ofisialin’ny Sahraoui